चिनियाँ कोरोना एक्सपर्टकाे दावी- चार हप्तामा कोरोना विश्वबाट उन्मुलन हुन्छ - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
बिहिबार, चैत्र २०, २०७६ (April 2, 2020, 10:34 am) मा प्रकाशित
बिहिबार, चैत्र २०, २०७६, काठमाण्डाै ।
चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्वनै ग्रस्त छ । जसका कारण धेरै देशहरु ‘लकडाउन’मा छन् । जनजीवन अस्तव्यस्त छ भने आर्थिक अवस्था पनि क्रमश नाजुक हुने क्रममा छ ।
यस्तैमा चीनका कोरोना भाइरस एक्सपर्टले भने आगामी चार हप्तामा कोरोना भाइरस विश्वबाट उन्मुलन हुने दावी गरेका छन् ।
उनले कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या घट्ने र चीनमा दोस्रो पटक कोरोना संक्रमितको संख्या पनि नदेखिने उनको दावी छ । यो दावी डा. झांग नेनशनले गरेका हुन् । उनी चीन सरकारले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानका व्यक्ति हुन् ।
८३ वर्षीय डा. झाँगले भने ‘चीनमा कोरोना भाइरसले फेरि हमला गर्ने छैन । यसको मनिटरिङ सिस्टम हामीले बलियो बनाएका छौं । उनले यो कुरा एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका थिए । उक्त अन्तरवार्ता डेलीमेलको वेभसाइटमा पनि प्रकाशित छ ।